Obi ụtọ na Ramadan-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọ ala ngwa mma CO., LTD
Obi ụtọ Ramadan
Oge: 2021-05-14 Hits: 31
N'ụbọchị a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri 1.8 ndị Alakụba gburugburu ụwa na-eme ememme Eid al-Fitr! Ọ dịghị okpukpe nwere ike iji atụnyere; Ọ dịghị mmemme mba ụwa ọzọ na-abịaru nso; Enweghị ọtụtụ ụmụaka obi ụtọ; Ọ nweghị nzukọ ọzọ nwere ike ịhazi ihe omume na ọkwa a! dị ka ị hụtụbeghị! Agbanyeghị agbụrụ, ụcha, agbago, mpaghara, afọ, asụsụ, ọnọdụ dị elu ma ọ bụ dị ala, n'agbanyeghị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ụwa na-agba ọbịbịa nke Eid!
Daalụ ịrụ ọrụ, maka ekpere mgbapụta, amara nke Ramadan a ma ama, na-eme ememme Erde, ka anyị mee ka egwu nke ịmara Chineke, mee ka anyị nwee obi ụtọ, kekọrịta amara!
Ekele gị na egwuregwu egwuregwu dị mma, gọzie maka Ramadan auspicious maka gị, jiri anya mmiri gwa ndị ọbịa Allah, jiri ejiji nabata jisie ike, iwe iwe Jenụwarị na-eme ka gị wee mara na irube isi bụ ihe kacha enye obi ụtọ! .
Ọtụtụ puku okwu, enweghị ụzọ isi kwuo okwu, ụwa dịịrị gị mma, kwa ụtụtụ iji kpee ekpere maka gị, ụbọchị ọ bụla ọdịda anyanwụ chọrọ gị udo, ọ joyụ gị niile, ahụ ike ọ bụla gị na gị ruo mgbe ebighi ebi, Achọrọ m ka ị nwee mmemme Eid al- Kwadoro!
Oge agba ụtụtụ na-esonyere anyanwụ na-awa, anyị na-eweta Eid al-Fitr kwesịrị nsọpụrụ, n'ụbọchị a dị mma, kpee ekpere ka Chineke nye gị na ezinụlọ gị ezigbo ahụike, ndụ ọ lifeụ!
Na mbata nke kwa afọ nnukwu Eid al-Fitr, ihe niile na-arịọ maka udo, ahụike na obi ụtọ nye onye naanị ya, onye kachasị ike, Onyenwe anyị onye maara ihe gara aga na ọdịnihu.
Nwoke kachasị ihe niile, ihe kachasị ekele bụ Allah, mmadụ! Ihe kachasị baa uru bụ okwukwe, ndị mmadụ! Onye kachasị akọ bụ ịrọ òtù, ndị mmadụ! Kasị mara mma dị mma, mmadụ! Obi ụtọ kacha mma bụ izute, ndị mmadụ! Obi uto nke uwa abuo na obi uto!
Okwukwe bu oku, gbaze ice nke ndu, nrube isi bu mmiri, igba mmiri na nkpuru akiri nku, ujo bu ifufe, ikufu uzuzu nke obi, olile anya bu mmiri ozuzo, ime obi ndi okooko osisi nma, OK, Mu ndi mmadu enweghi ike ime enweghị anọ ndị a.
Ekele gị na-acha anụnụ anụnụ, na-agọzi gị na Ramadan dị mma, na-akwa ákwá na ndị ọbịa nke Allah, na-eyiri uwe zuru oke iji nabata ihu ọma, iwe iwe nke Jenụwarị na-eme ka m mara na irube isi na Onyenwe anyị bụ obi ụtọ kasịnụ!
Ebere bụ ifufe, akwụkwọ ozi ahụ bụ ụgbọ mmiri, Li Cheng bụ ụgbọ mmiri, ụzọ bụ oké osimiri, ezi obi bụ nwa ọhụrụ, ọmịiko bụ ifufe, ịmịpụta akwụkwọ ozi ahụ bụ ụgbọ mmiri, mmiri eziokwu na-ebu ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ, ịmata Onyenwe anyị naanị otu nwa, ọwara na-eguzosi ike n'ihe 1: nọgide na-aga n'ihu!
The ọnwa magburu onwe nke Ramadan na ya unspeakable ibu na oké osimiri nke amara esiwo anyị, ọnwa ọhụrụ na-agbasa ngwa ngwa pụtara na mberede, na ememme ọ joyụ-abịa. N'ebe a adịghị abịa; N'etiti ngwakọta nke otu ichegbu onwe onye ọ joyụ. , anyị na-ekpegara Allah ekpere oge niile: okwukwe dị ebube, nnabata nke chachuan, ndị nne na nna site na ngwa ngwa o kwere mee, banye n'eluigwe, ụmụaka nwere nchekwa!
Wayzọ mbụ a ụda na agba anya abụọ! Ikwu hel na Eid ọzọ! Ka Allah nye obi ụtọ, udo na auspiciousness!
Nkwenye dị n'otu, rube isi na Gulan, onyonyo nke ndị maara ihe, netwọkụ mgbasa ozi, ụkpụrụ siri ike, ndụ, agụmakwụkwọ, ụwa abụọ na arọ.
Ramadan dị ebube ahapụwo anyị, ụbọchị ememme ahụ eruola, jiri ezi obi na-ekwu ngalaba dị mma na isi nke Selan, Ansay abụọ ga-ejide osisi! Echere gị na ezinụlọ gị ezumike ezumike!
Mee ka anya agba gbaa ụfụ gị, ka Ma Zi sachapụ nsogbu gị, hapụ ngwa ngwa gbanyụọ mmehie gị, ka Koran wetara gị obi ụtọ, ka Allah nye gị udo!
N'abalị nwere kpakpando na-egosi ọmarịcha; Oké osimiri nwere ụda ebili mmiri na-egosi ihe omimi; Otu afọ na ọnwa nsọ nke Ramadan; Ndị enyi enwere gị nkwanye ùgwù; Ekele dịrị gị.
Oge mgbụsị akwụkwọ na-acha odo odo, Ramadan pụọ, mmiri nke Osimiri Yellow na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ; Erde ememme, amara nke Onyenwe anyị, amara na-enweghị ngwụcha ruo mgbe ebighị ebi. Anya abụọ, achọrọ m udo, obi ụtọ na ezinụlọ mgbe niile; Na-echeta Onyenwe anyị oge niile, yana mgbalị, gị na Enwere m ike ịdị mma echi.Ma gị na ezi na ụlọ gị ọ aụ ezumike!
Previous: Etu esi ekpebi ma taya ụgbọ ala bụ enweghị ikuku
Ọzọ: Kedu mgbe igwe taya ụgbọ ala na-agbanwe? Nwere ụgbọ ala ma ọ bụ enweghị ụgbọ ala ị ga-ahụ!